Usoro ahia 21 iji kpalie / kpasuo ndị ọrụ ibe gị iwe | Martech Zone
Anọ m ọdụ n'ụlọ na-ejide ụfọdụ ịgụ akwụkwọ n'abalị a. Adị m onye mara mma nke na mgbe ọ bụla m kụrụ ụfọdụ okwu okwu, m na-agakarị na Wikipedia iji chọpụta ihe m na-agụ. M na-ebilikwa ebe ahụ kemgbe ọtụtụ afọ… ya mere, mgbe m gụsịrị ihe ọ bụ, m tụgharịrị anya m wee laghachi ịgụ.
Ihe mere m ji apị anya m bụ na ndị na-ede akwụkwọ (ọkachasị ndị edemede ahịa) na-eche na a manyere ha ichepụta okwu ọhụụ ka anyị mụta ma dochie okwu ochie, nke na-agwụ ike. Echere m na ọ na-eme ha ka ha mara ihe karịa mgbe anyị na-alaghachi n'adighi-ekwesighi.
Lee ụfọdụ n'ime okwu ndị ahụ:
Mediagwọ Media - Anyị na-akpọ nke a mgbasa ozi.
Mgbasa Ozi - Anyị na-akpọ nke a okwu ọnụ.
Nwepu Media - Anyị na-akpọ nke a mmekọrịta ọhaneze.
okporo ụzọ - Anyị na-akpọ nke a mgbasa ozi or ikiri.
Egwuregwu - Anyị na-akpọ nke a ụgwọ ọrụ, iguzosi ike n'ihe, badge or usoro usoro. Bọọlụ Scout bụ ihe dị ka afọ 1930, nke a abụghị ndị ọhụụ.
njikọ aka - Anyị na-akpọ nke a ọgụgụ, ege, ma ọ bụ nlele (na mgbe e mesịrị… ịza ajụjụ)
content Marketing - Anyị na-akpọ nke a ide.
Kpọọ-na-Action - anyị na-akpọ nke a ọkọlọtọ mgbasa ozi. Naanị n'ihi na ọ bụ na saịtị nke anyị, ọ pụtaghị na anyị chọrọ aha ọhụrụ.
osooso - anyi na-akpo nke a nkwalite.
Ihe ngosi - (eg. Social Graph) anyị na-eji nanị ịkọwa nke a dị ka mmekọrịta.
Njikwa - anyị na-akpọbu ya ewu ewu.
-ebuli - anyi na-akpo nke a meziwanye.
Mmezi - anyi na-akpo nke a ịhazi.
Akara ahịa - anyị na-akpọbu ndị a dashboard.
Analytics - anyị na-akpọbu ndị a akụkọ.
Emelitere: Ndị mmadụ - anyị na-akpọbu ndị a ngalaba dabere na omume omume ma ọ bụ omume igwe mmadụ nke ndị na-enye data mepụtara.
Infographics - anyị na-akpọbu ndị a eserese, mgbe ụfọdụ ihe ngosi data, ma ọ bụ akwụkwọ ịma ọkwa. Anyị ga-kpọgidere ndị dị jụụ na anyị cubicles (er .. workstations).
Ngwaa - anyị na-akpọbu ndị ahụ okwu.
Akwụkwọ edemede - anyi kpoturu ndi ahu akwụkwọ. Naanị ha bịara na ọcha.
Ndi mmadu - anyi akpoghi ihe o bula .. anyi ga eji aza ekwenti ma obu uzo n’onwe anyi.
kwukwara, sị: Ọnọdụ ahịa - Anyị na-akpọ nke a ike ma ọ bụ ezubere iche ọdịnaya.
E nwere ụfọdụ ndị ọzọ oké okwu, oke… ngwakọ, njikọta, ike ọsọ, democratization, obe-ọwa, templatize, aggregation, syndication, osooso…
Mụ okorobịa a kwesịrị ịla azụ na Google+, hie ụra, ma mee ka ọ gbadaa na okwu 8th nke anyị na-echeta n'ezie. Gịnị mere ụmụ mmadụ ji agbanwe agbanwe mgbe niile? Ikekwe ịkpọ ya site na ihe ọhụụ pụtara na anyị agbanweela n'ụzọ ụfọdụ? (Anaghị m azụta ya, ị?).
M na-eche ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-alụ ọgụ na mfe mbọn ma ọ bụ na-agụsị akwụkwọ si a crappy website, hapụ ya ngwakọ ngwangwa nwetara mgbasa ozi mgbasa ozi nke ngwa ngwa ya na-abawanye site na njikọ aka mmadụ.
N’eziokwu niile, echere m na m mejọrọ. Enwere m ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ, ọ bụghị ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Ọ bụ n'ezie karịa nke inbound ahịa gị n'ụlọngaMa m gbara chaa chaa na a ga-enwe mgbe niile ọhụrụ media, ma inbound nwere ike dochie anya okwu nzuzu dika nnukwu.
Know mara, dị ka megide iju.
Tags: ọganihuAnalyticsikikekpọọ ka emecontent Marketinggburugburu ahịanhaziakwụ ụgwọ mgbasa ozinjikọ akagamificationeseresehumanizationInfographics Ahịaebulinwere mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa ozindị mmadụkaadị akaraokporo ụzọngwaaAkwụkwọ edemede
Ndị na-emepụta ihe na Web Web na Web Developers
Aug 18, 2011 na 4: 21 AM
Ewezuga na m chere na "ọdịnaya ahịa" na "ere ịde ihe." Ma ọ bụ karịa "ire ihe ndị e dererịrị."
Akpọrọ m ikweta ya, mana ejirila m opekata mpe 7 n'ime ndị a 1) n'echeghị echiche banyere ya ma ọ bụ 2) nwere ihu kwụ ọtọ.
Aug 18, 2011 na 2:02 PM
Erik - M na-ejikwa ha! O di nwute, anyi kwesiri ijide okwu ndi ohuru ma jiri ya. Ma obu ihe ozo anyi yiri ka anyi agbanwebeghi!
Aug 18, 2011 na 9: 24 AM
Ihe ederede a mere ka m mụmụọ ọnụ ọchị, na-eji ụfọdụ n'ime okwu ndị a ọtụtụ afọ na ụfọdụ ọ bụghị ma ọlị ... Segmentation and market segments has been a marketing term thus .. n'ezie otu nke m na-eji kemgbe afọ 20 agbanyeghị!
Aug 18, 2011 na 2:07 PM
M na-echeta mgbe akparamagwa ụdị na-e mepụtakwara na anyị nanị mere “gbara ajụjụ” na ahaziri mkpọsa ndị 'ụdị'. Enweghị m ike icheta ịkpọ ya nkewa n'oge ahụ - n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ na ọ dị! Mgbe e mesịrị, anyị na-akpọ ha “personas”… ma eleghị anya, nke gaara aka mma depụta!
Aug 18, 2011 na 2:15 PM
Okwu gị masịrị m nke ukwuu, emelitere m ya Paula !!!
Aug 18, 2011 na 2:54 PM
Daalụ Douglas, ụgwọ m dị na listi ọhụrụ ahụ ga-abụ ikike iji dochie ewu ewu, naanị na-enye nkọwa miri emi nke omimi nke ihe ọmụma, nke nwere ike ọ gaghị abụ ikpe n'ezie, mana ọ na-ada ụda! 🙂
Debra Feldman kwuru
Aug 23, 2011 na 2:48 PM
A na-ele ịchụ nta ọrụ anya dị ka mgbasa ozi ahịa, ọ bụghị itinye maka ọrụ. Ahụghị m “onwe mbọn” nke a na-akpọ “iru eru” mgbe na-ezo aka a gaje ọrụ nwa akwukwo. Onye ọ bụla nke oge a nwere "akara" nke bụbu "njirimara" ha ma ọ bụ "isi ọrụ" ma ọ bụ "ike dị elu." Oh, ọzọ bụ "akwụkwọ ahịa" nke a na-akpọbu resume ma ọ bụ bio nke a na-akpọkwa "profaịlụ [n'ịntanetị].” A "ọrụ" bụ "ohere" na "nsogbu" bụ "ihe ịma aka." "Ndị ọrụ" gbanwere "akụ mmadụ" nke ghọrọ "nnweta onyinye." Ya mere, ọ na-aga… ..
Ọ bụ Larry Goldman
Aug 24, 2011 na 3:28 PM
Mpempe dị mma. Ọ ga-amasị m ịhụ onye na-agbanye "leverage" nke okwu ahụ!
Aug 24, 2011 na 5:40 PM
Oh nwoke! Leverage bụ otu ọkacha mmasị m. 🙂
Nnyocha nyocha Lana
Aug 24, 2011 na 5:09 PM
Ọ na-atọ ọchị ma bụrụ eziokwu na ọtụtụ ikpe! Mana echere m na ndị na-ere ahịa na-anwa ikwu okwu n'asụsụ nke ndị ahịa ha kwere nghọta na "ọha na eze na-ere ahịa ọha na eze". Ọ dị ka sistemụ sygnal ọgbara ọhụrụ.
Aug 24, 2011 na 5:41 PM
Enwere m olileanya otú ahụ Lana! Echere m na mgbe ụfọdụ anyị na-eji ụfọdụ n'ime okwu ndị a ọ na-eyi egwu!
Sep 1, 2011 na 4:40 PM
M na nzukọ onye ọrụ gị nwere ụnyaahụ nwere mmasị na ịde blọgụ na ịre ahịa n'ịntanetị. Ọ gwara m na m na-ekwu okwu dịka ndị ahụ guzobere saịtị blọgụ ya. Gaa m na-eche echiche banyere ebe ezigbo mmasi m bu …… ahia. Echere m na mgbe ị gụsịrị ọtụtụ Ama na isiokwu metụtara ahịa, ị na-ewere okwu ahụ n'amaghị ama.
Nov 27, 2011 na 4:47 PM
Na ebe a echere m na okwu ahụ bụ "curation" bụ mkpụrụedemede mkpụrụedemede anọ. Akwụ m ọtọ gbazie corre
Na-enwe obi ụtọ n'isiokwu a.
Nov 29, 2011 na 10:32 AM
Edemede dị ukwuu ma bụrụ eziokwu banyere ndị mmadụ na-eche echiche 'mkpa' ka ọ gbanwee. Ọ dị ka ọ bụ n'ọdịmma ndị mmadụ ịkọwapụta ihe ọhụụ na ihe ọ bụla dị ọhụrụ ma ka mma - o doro anya na nke a gụnyere okwu. Ezigbo ihe ọzọ edepụtara site na otu akwụkwọ site na somediayoday bụ "mmekọrịta" ugbu a dochie "ịrụkọ ọrụ ọnụ." (http://socialmediatoday.com/node/397449&utm_source=feedburner_twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=autotweets)
Aug 25, 2012 na 10: 28 AM
Otu ezigbo ndụmọdụ m na-agabiga n'okporo ụzọ nwere mmasị iji okwu 'bifurcation' na ahịrịokwu nke atọ ọ bụla. Enweghị ike ịsị 'mgbe ahụ anyị kewara ha ụzọ abụọ.' Echere m na ị ga-akwụ ụgwọ karịa mgbe ndị mmadụ na-aghọtaghị gị.
Aga m ekwupụta 'ịkpọ oku ka emee ihe.' Enwere m akwụkwọ m dere ede site na afọ 1920 nke nwere isi edepụtara maka ịkọpụta ịkpọ oku ka anyị rụọ ọrụ. Onye ọ bụla na-eji ya dịka otu 'banner ad' 'enweghi ezigbo azụmaahịa.